Kenya oo Soomaalida u fududeynaysa Fiisaha Dal ku galkeeda | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo Soomaalida u fududeynaysa Fiisaha Dal ku galkeeda
Kenya ayaa dareentay in dan weyn ay ku qatay ganacsigii kala dhaxeeyay Soomaaliya.
NAIROBI, Kenya - Dowladda Kenya ayaa shaacisay iney dhowaan fududeyn doonaan Fiisaha dal ku galeeda, una fududeyn doonaan dadka Soomaaliyeed oo dhibaato weyn ku qaba.
Xoghayaha arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau oo ka warbixinayey safar uu ku yimid magaalada Muqdisho, wuxuu sheegay inuu u kuur-galayey xaaladda magaalada iyo sidoo kale xoojinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya.
Wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ku qasban tahay iney si weyn u eegto ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay, wuxuuna tilmaamay in maalin walbo ay Muqdisho ka degaan shirkado diyaaradeed oo laga leeyahay dalalka Turkiga, Itoobiya, Uganda iyo Jabuuti.
"Waxaan u safray Soomaaliya aniga iyo wafdi kooban oo ka socda wasaarada arimaha dibada oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo maaraynta iyo khubaro kale si aan u eego xaalada kooxdeena diblomaasiyadeed ee Soomaaliya," ayuu yiri Kamau.
Sidoo kale, wasiirka ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ku noolyihiin 35-kun oo Kenyan ah, sidaasi darteed xiriirka Labada dal uu yahay mid xooggan, halka Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya.
Ulajeedka Kenya ayaa ah in la fasaxo diyaaradihii Khaatka oo dalka laga mamnuucay, waxaana hadda Khaatka lagu keenaa doonyo, taasi oo caqabad ku noqotay ganacsatada Kenyanka ah.
Kenya ayaa isku dayday marar badan iney bahdilaad ku sameyso dadka Soomaaliyeed, waxayna ku xad-gudubtay xiriirkii kala dhaxeeyey Soomaaliya, iyadoo ciidankeeda ay dhibaato ka geysteen dalka.